चीन र जापानमा उद्धार समृद्धि र धनको प्रतीक मानिन्छ। रूसमा, अनुहारहरू अन्डाको फोहोर गर्ने औषधीय गुणहरूको कारणले चम्किएको हुन्छ, एक वास्तविक नाजुक मानिन्छ। त्यसकारण, हाम्रो देशमा, घरमा रगतको खेती बढि लोकप्रिय छ।
क्वेप्सहरू लगभग हरेक दिन अण्डा लगाउँछन् र यद्यपि उनीहरूले बेग्लै पक्षीलाई मानिन्छ, जसलाई उच्च अन्डा उत्पादन कोयम राख्न को लागी इष्टतम तापक्रम र प्रकाश व्यवस्थाको अवलोकन गर्न सकिन्छ र प्रोटीनमा अमीर ब्यापार गर्ने फीडहरू चाहिन्छ। घरमा प्रजनन क्विजले तपाईंलाई धेरै पैसा खर्च गर्न आवश्यक छैन र धेरै समय लिने छैन।
पक्षी स्व-निर्मित वा मानक कक्षमा समावेश गर्दछ, जसको एक पर्खाल मेष बनाइएको छ। निश्चित नियमहरू अवलोकन नगरी घरमा क्विजहरूको सामग्री असम्भव छ: तपाइँले एकपटक एक पटक एकपटक फिल्म परिवर्तन गर्नुपर्छ जुन पिंजराको तल रहेको छ, दिनभरि वयस्क पक्षीहरू दुई वा तीन पटक खुवाउनुहोस् र पक्का पानीको कटोरामा सफा पानी हो।
यदि तपाइँ पक्षीहरूलाई कम समय चल्न चाहानुहुन्छ भने, स्वचालित पेय कटोरा र बंकर फिडरहरू स्थापना गर्नुहोस्, जसमा प्रत्येक तीन दिनमा एक पटक खुवाउनु पर्छ। सेललाई बिना ड्राफ्ट बिना सुखाने र गहिरो स्थानमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।
क्वेल 20 डिग्री को तापमानमा राखिएको हुनुपर्छ, र रोशन कम्तिमा चौध घण्टा घण्टा हुनुपर्छ, तर एकै समयमा क्विलले उज्ज्वल प्रकाशलाई मनपर्दैन। कैदमा प्रजननको लागि सबै प्रजातियों मध्ये सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त जापानी क्वेल छ, जुन धेरै पीढीहरु को लागी कैदीमा बन्छ। यसका लागि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, घरको फोकस, कम खपत, पोषणको गुण र निकट सम्बन्धी क्रसहरूको प्रतिरोधी को लागी सामग्री को लागी धेरै समस्यापूर्ण समस्या छैन। क्विलले सुकेको वा गीला मिश्रित चारासँग व्यवहार गरिन्छ, जुन हप्तामा दुई पटक, ज्ञानपूर्ण व्यक्तिलाई सल्लाह दिइयो।
घरबाट प्रजनन रित्तो जटिल छ भन्ने तथ्यले गर्दा कैदीमा रित्तो आफैं ह्याण्डे हङकङ्गहरू मात्र। यसैले इन्सुबाइटरलाई च्याटहरू हटाउन आवश्यक छ। तपाई यसलाई आफैं बनाउन सक्नुहुन्छ वा स्टोरमा किन्न सक्नुहुन्छ। इन्क्यूबेटरको डिजाइन र आयाम फरक हुन सक्छ, केवल 36-39 डिग्री को तापमान को बनाए राखन को लागी यसको क्षमता र समय देखि स्वचालित रूप मा अण्डाहरु लाई बदलन गर्दछ। तर यदि स्वचालित इन्क्यूबेटरले इन्इन्टिबाइटरको कार्यहरू छैन भने, तिनीहरू दिनहुँ चार घण्टामा घुमाउनु पर्छ। इन्च्युबेटर "ह्याच" क्विला अण्डाहरू सातौं दिनका लागि - यो यदि इन्सुलेशन अवधिको समयमा शासनको कुनै उल्लङ्घन छैन।
मासिक उमेरको घरमा बढ्दो रगतहरू प्लाईवुड वा काठको बनेको बक्समा बनाइन्छ। दुई-हप्ताको उमेर सम्म, बक्सेमा च्याटहरू स्थिर प्रकाश प्रदान गर्न आवश्यक छ, र त्यसपछि 15 घण्टासम्म "हल्का दिन" को अवधि बिस्तारै घटाउनुहोस्। दैनिक क्वेललाई 37 डिग्रीको तापमानमा राखिएको हुनुपर्छ, हप्ताको कुखुराले 34 डिग्रीको लागि आवश्यक छ - थप हप्ता - 30, 26 र 22 डिग्री।
घरको प्रजनन क्वेरीहरू उनीहरूको उचित खाना चाहिन्छ। जीवनको पहिलो हप्तामा कुखुराले एक चोटी वा क्वेला अण्डाको साथमा पाँच चोटि खुवाएको छ, ठूलो बिरुवामा खसेको, उबलिएका माछाहरूसँग पकाइएको, कुचुरको बत्तीको टुक्रा र भुइँमा खुवाउने चारामा एक ठूलो ग्रिटर संग मिश्रित। अण्डलाई शेलको साथमा कुच्याउन आवश्यक छ - यसले महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण खनिजहरू समावेश गर्दछ।
घरमा बढ्दो रगतहरू प्रभावकारी हुनेछ यदि एक महिना उमेरको उमेरमा पिजनमा बीउ को लागी प्रजननको लागि उनीहरु लाई लिङ्ग अनुसार विभाजित गर्दछ। एउटै समयमा जवान क्वेरीहरू (यदि अतिरिक्त छ भने) मासुको लागि फ्याटिएको हुन्छ र आहारलाई अण्डा प्राप्त गर्न छोडिन्छ।
प्रजनन प्रहारको लाभ स्पष्ट छ। एक क्विल (वयस्क) प्रति दिन 25 ग्राम फीड खान्छ, फीड को तलहोल उमेर सम्म कि किलोग्राम भन्दा कम हुन्छ। एक वर्षको लागि क्विलले तीन सय भन्दा बढी अण्डाहरू लिन सक्दछ, त्यसैले यो निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ कि क्वेन्स प्रजनन धेरै लाभदायक व्यवसाय हो।
गेराजमा तारिख: आत्म-विधान
बगैंचाको सजावटबाट बनेको हातबाट सामग्रीहरू (तस्बिर)
रेडियो - यो रेखाचित्र मा पद। योजना मा रेडियो घटक को पदनाम कसरी पढ्न?
समतल खुट्टा संग संघर्ष को एक माध्यम रूपमा भौतिक चिकित्सा
डेजी फूल क्षेत्र: विवरण र उपयोगी गुणहरू
कसरी फर्नीचर आफ्नै हात improvised बनाउने?
पाखुरा जहाँ एक व्यक्ति?
सबैभन्दा राम्रो नमीको अनुहार मुखौटा: समीक्षाहरू